Archive du 07-sept-2021
Fiainam-pirenena Miomana haka fahefana ihany koa ny AVI
“Misy milaza hoe mpanolotsaina manokan’ny Filoha aho. Hatramin’ny 2019 nahalany an’i Andry Rajoelina ho filoha dia tsy notendrena intsony aho,
Vita izay ny tsikera sy fananarana ary soso-kevitra rehetra nialoha ny lalao manaraka izay ho tontosain’ireo mahery fontsika indray ho amin’ity anio ity atsy Tanzania.
Fanafihana Taxibe 110 Jiolahy 5 nanambana basy ireo mpandeha
Jiolahy miisa 5 no indray nanambana basy mpandeha tao anaty taxibe ao amin’ny zotra 110 mampitohy an’Anosizato Atsinanana sy Analakely omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora.
Fitantanan-draharaham-panjakana Governora 5 mety hoesorina ?
Governora 5 amin’ny 20 efa notendrena no tsy maintsy hoesorina, raha ny famakafakana nataon’ny fampahalalam-baovao iray.
Maroantsetra Tafakatra 5.000 ireo olona voan’ny tazomoka
Tsy mitsaha-mitombo ireo olona lasibatry ny aretina tazomoka any amin’ny distrikan’i Maroantsetra. Tafakatra 5.000 isa mantsy ireo marary tamin’ity taona ity, raha 4.000 isa tamin’ny taona 2020.
Boky sy CD hosoka An’aliny no nodorana teny Ambohitrimanjaka omaly
Notontosaina omaly maraina teny Ambohitrimanjaka ny fandorana ireo boky hosoka 105 ka ny 80 boky malagasy ary ny 25 boky vahiny. Niampy ireo CD hosoka miisa 54.650 izany.
Mampitandrina ny mpitsabo Mamono haingana noho ny Covid 19 ny Pesta
Manomboka ny volana aogositra ka hatramin’ny volana aprily no tena mampahazo vahana ny valan’aretina pesta eto amintsika.
Orinasa SECREN Nambara fa hovahana ny olana
Tonga eto an-drenivohitra ny delegasiona avy any amin'ny orinasa SECREN S.A ahitana ny Tale Jeneraly Ntsay Abel, ireo mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana ary ny solotenan'ny mpiasa miisa 11,
Fanaovana vola sandoka 7 lahy no tratra, 15 taona no zandriny indrindra
Lehilahy miisa 07 no nosamborin’ny avy ao amin’ny CSP Mahanoro omaly Alatsinainy noho ny fanaovana vola sandoka
Ho hamalifaliana ny Malagasy Handeha amin’ny TVM ny lalaon’ny Barea rehetra
Handeha mivantana ao amin'ny Televiziona Malagasy ireo lalao rehetra hatrehin'ny Barean’I Madagasikara ,izay ao anatin'ny fifanintsanana Mondial 2022 satria efa novidin'ny
Lehilahy efa nifonja tany tsiafahy Tratra saika hanendaka tovovavy 2 indray
Lehilahy iray, efa nifonja no tratran’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 teny amin’ny faritra FTA II sy New Eden ny sabotsy 04 septambra teo raha mbola teo am-pikasana hanendaka tovovavy.
Maitre Olala “Olona marary an-doha io mitory lava an’i Clémence io”
Fanim-pitony izao ny fitorian’ny ben’ny tanàna sy ny tariny an’I ramatoa Clemence Raharinirina aty amin’ny polisy ekonomika, izay tsy maintsy handeha any amin’ny fitsarana, hoy ny mpisolovava azy,
Tambazotra Telma Miverina mihitsoka indray
Matetika mihitsy ny nahenoana fitarainana fihitsohana eo anivon’ny tambazotram-pifandraisan-davitra Telma teo aloha teo.
Fanindrahindrana ny baolina kitra Naneho ny alahelony ireo mpankafy lavalava
Na dia novaina ho Kianja Barea aza ny anarany dia tsy mampiova ny fanatanjahantena izany fa tonga marobe ny tontolon’ny Rugby ny sabotsy teo tetsy amin’ny Kianja Barea Mahamasina nanatrika ny fitokanana izany.
Salon de l’étudiant et de l’emploi Tan-tsoroka ho an’ny tanora, mpitsidika 150 000 no andrasana
Ho ambohipihaonan’ny tanora ana hetsiny ny « Salon de l’Etudiant et de l’emploi » andiany fahatelo, hatao eny amin’ny tokontanin’ny ORTM Anosy ny 20-21-22 septambra 2021 izao,
Fifidianana ny biraon’ny OJM Milaza ho tsy mitsabaka ny minisitera
Noraisin’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, tetsy amin’ny birao fiasany Anosy ireo solotenan’ny Komisionana hitambarana hisasahana